"Glen East" kwiBridge Family friendly
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguWayne
Indlu yakudala yaseMpuma yenkulungwane yama-20 kumgama nje omfutshane wokuya kwiZiko lesiXeko, `Toowoomba's Queens Park, iiGadi zeBotanical, iiCafes ezininzi kunye neendawo zokutyela. Ilungele ukuhlala usapho kwaye ukuba unesilwanyana sasekhaya singathethathethana nabo ukuba bahlale nabo.
I-Air Conditioning efakwe ngokupheleleyo ukuze uphile kamnandi nokuba injani na imozulu. Igumbi lokuhlala elahlukileyo lokuhlala kunye negumbi lokutyela kunye neengcango zaseFransi ezivulekele kumagumbi angaphandle okonwabisa kubandakanya ne-BBQ. Indawo yokuhlala yemoto ezi-2 kwindawo enendawo yokupaka eyaneleyo yesitrato yasimahla.
QAPHELA. Isifudumezi sokutsha asivumelekanga ukuba sisetyenziswe kwiindwendwe ngeenjongo ze-inshorensi.
Indawo ekumbindi kakhulu.
Burrow Cafe 110m
Toowoomba Thai 500m
IKholeji yaseToowoomba Tafe 160m
Queens Park 500m
Izitiya zeBotanical 500m
Iziko leSixeko 700m
Iindwendwe ziyakwazi ukuba noqhagamshelwano kangangoko zinqwenela nge-ofisi yethu evulelekileyo iiyure zokusebenza eziqhelekileyo kunye neeyure ezingama-24 zoqhagamshelwano olungxamisekileyo. Umamkeli wakho uhlala nje i-500 yeemitha ukusuka kwindlwana.
Iindwendwe ziyakwazi ukuba noqhagamshelwano kangangoko zinqwenela nge-ofisi yethu evulelekileyo iiyure zokusebenza eziqhelekileyo kunye neeyure ezingama-24 zoqhagamshelwano olungxa…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R5636
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- North Toowoomba